स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण : प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सोध्दा उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री मौन – SaipalNews.com
चैत्र १७, काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि चासो देखाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, ‘खरिद प्रकरणमा देखिएको विवाद के हो ? संकटका बेला किन यस्ता विषय विवादमा आए ? काम गर्ने तौरतरिका कहाँ मिलेन वा भएको के हो ? ’